CASHO SHARAF LOO SAMEEYAY XULKA SOMALIA EE UK
Xulka Somalia ee UK ayaa ka qeybgalay tartan kubadda cagta ah ee sannadkiiba mar lagu qabto magaalada London. Tartankan oo la magac baxay The Inner World Cup, ayaa waxaa sannadkan ka soo qeybgalay 32 waddan. Xulalkan ayaa waxaa loo qeybiyay 8 qeyb(Groups). Xulka Somalia ayaa waxay ku jireen Group H oo ay ku wada loolamayeen xulalka France, Iran iyo Ecuador .
Ciyaarihii ay yesheen Somalida ayaa intaba wada badiyay iyagoo ay guusha u raacday sidan:
Somalia 2-0 Ecuador. Somali 4-2 Iran. France 0-2 Somalia.
Haddana wareegii labaad ayaa waxay yesheen laba kulan oo kale iyagoo ciyaarta hore ay xulka Japa 1-0 ku soo mareen. Halka Poland ay isla dhaafi wayeen 0-0 markaana rigooreyaal (Penalty) loo dhigay ay Somalida guusha ku raacday sidaan ugu soo gudbay Semi-Finalka.
Ciyaartan Sem-Finalka ayaa waxay fooda is dareen xulka Columbia oo ahaa xul aad u adag. Ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa waxay labadan kooxood isla dhaafi wayeen 0-0, sidaan waxaa toos loo aaday laadka xurta ah rigoore ama penalty qofba siduu u yaqaano. Rigooreyaashan ayaa xulka Somalida nasiibka ka eexday iyagoo halkaasi loogu badiyay.
Xulkan Somalida ayaa waxaa tababare u ahaa Xiddigii hore ee kooxda Munishiibiyo Dahir Gacmey, iyadoo ay tababare ku xigeen u ahayeen Bile oo u ciyaari jiray kooxda Madbacadda iyo Macallim Xassan Dhuudhi kooxda Jeenyo. Guddiga kooxda waxaa ka mid ahaa Guddoomiye Maxamed Buwe oo isaga aad ugu dadaalay markasta sidii loo horumarin lahaa ciyaaraha iyo Maxamed Deeyow oo isagana qeyb weyn ka qaatay maamulka xulkan.
Ugu dambeyntii waxaa xulka Somaliada casho sharaf mahadcelin ah u sameeyay ganacsade Ismaciil oo isagu aad u gacan qabta kooxaha ka dhisan magaalda London